(ဇာတ်ကားခံစားခြင်းနှင့် Pixar Studio အပေါ် အပေါ်ယံသုံးသပ်ခြင်း)
Pixar ကထုတ်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေ ဘာကြောင့် ကောင်းတာလဲ?
Pixar ရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းအများစုထဲမှာ လူဆိုးအစစ်သည် ကျွန်တော်တို့လူကောင်းလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင်တွေပဲ။ ဥပမာ Toy Story က Woody ဇာတ်ကောင်ကို အရင်ကြည့်ကြရအောင်။ Woody ရဲ့မာနတွေနဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေရယ် Buzz Lightyear ရောက်လာတော့ မနာလိုတဲ့ စိတ်တွေရယ်ကြောင့်ပဲ ပြဿနာတွေဖြစ်လာခဲ့ကာ အဖွဲ့နဲ့ကွဲသွားရတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ကို တစ်ခြားသူငယ်ချင်းတွေက ကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားကြရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာခဲ့ရတယ်။ ထိုဖြစ်ရပ်တွေဟာ ပထမဆုံး Toy Story ဇာတ်ကားတစ်ကားထဲမှာပဲ မဟုတ်ဘူး။ ဒုတိယဇာတ်ကားနဲ့တတိယဇာတ်ကားတွေထဲမှာလဲ အလားတူ ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေကို မြင်တွေ့ရပြန်တယ်။ ထို့အပြင် Up တို့Brave တို့ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်တွေလည်း ထိုနည်း၎င်းပဲ။ အနီးစပ်ဆုံး ဇာတ်ကောင်ကို လေ့လာကြည့်ရမယ်ဆိုရင် မနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Inside Out ထဲက Joy ဇာတ်ကောင်က အနီးစပ်ဆုံးသာဓကပဲ။ သူမရဲ့အရာရာကို ဦးဆောင်လိုချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေရယ် သူမသာလျှင် အရေးအပါဆုံးလို့ထင်ပြီး Sadness ကို အရေးမပါဆုံးလို့သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းတွေကြောင့် မလိုလားအပ်တဲ့ ပြ ဿ နာတွေ စီတန်းပြီးတော့ ဖြစ်တော့တာပဲ။
ဒီအချက်တွေက Pixar က ဇာတ်ကွက်တွေထဲမှာ မပေါ်လွင်အောင် ဖုံးကွယ်ပြီး မြှပ်ထားတဲ့ အချက်တွေပဲ။ ဇာတ်ကောင်တွေကို အလေးထားပြီး ဇာတ်အသွားအလာကို လေ့လာစမ်းစစ်ကြည့်မှ မြင်နိုင်သိနိုင်ခြင်းတွေပဲ။ ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကာတွန်းကားတွေထဲက လူဆိုးဇာတ်ကောင်ကြီးတွေရယ် ခုထိတစ်ချို့ဇာတ်ကားတွေမှာ မြင်နေရတဲ့ လူဆိုးဇာတ်ကောင်တွေဟာ အလွန်ကို ပါးလွှာလှတယ်။ ထိုဇာတ်ကောင်ဟာ လူဆိုးလို့အမည်တပ်ထားခံထားခြင်းခံထားရသောကြောင့် မကောင်းသောအရာတွေကို ရည်ရွယ်ချက်မရှိ ပြုလုပ်လေ့ရှိတယ်။ သူသည် လူဆိုးဆိုလျှင် လူဆိုးဖြစ်သည်။ လုံးဝကို ဆိုးသွမ်းသည်။ အလွန်ရိုးရှင်းလှပေသည်။
ကျွန်တော်တို့The Incredible ရုပ်ရှင်ကို တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြလိုက်ရအောင်။ Syndrome သည် ဘာကြောင့်လူဆိုးဖြစ်ခဲ့ရသလဲဆိုရင် သူငယ်စဉ်က Mr. Incredible ကို ကူညီဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့ သူပြန်ကြားခဲ့ရတဲ့ စကားနှစ်ခွန်းကတော့ “Fly home” ဆိုတဲ့ အိမ်ပြန်ခိုင်းတဲ့ စကားနဲ့”I work alone.” ဆိုတဲ့ Syndrome ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကို ချိုးနှိမ်ခဲ့တဲ့ စကားတွေပဲလေ။
ဒါဆို Toy Story က Sid ဆိုတဲ့ကလေးဆိုးလေးကရော? သူဟာ လူဆိုးလား? သူဟာ ကလေးပီပီ အရုပ်ကလေးတွေနဲ့ကစားတတ်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်။ သို့သော် သာမာန်ကလေးတွေထက်တော့ အရုပ်ကလေးတွေကို အလွန်ကြမ်းတမ်းစွာ ကိုင်တွယ်ကစားတတ်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ပေါ့။ ထိုအရုပ်ကလေးတွေဟာ သက်ရှိလို့သူကိုယ်တိုင်မှ မသိခဲ့တာ။
ကျွန်တော် Pixar ရုပ်ရှင်တွေဘာကြောင့် ကောင်းသလဲဆိုတာကို ရှင်းပြထားတဲ့ Short Videos တွေကြည့်ဖူးတယ်။ သူတို့ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ များသောအားဖြင့် ဇာတ်လမ်းတစ်ခုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲ။ ထိုဇာတ်လမ်းဘာကြောင့် တင်ပြသင့်သလဲဆိုတာ ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့။ နောက်ခံထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းရယ်။ ဗဟိုပြုထားတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းရယ်နဲ့ထိုအချက်တွေကို အပေါ်ယံ တန်ဆာဆင်ထားတဲ့ ခံစားချက် အစရှိတဲ့ အရာတွေ ထည့်ပေးထားခြင်းဟာ Pixar ရုပ်ရှင်တွေရဲ့အောင်မြင်ခြင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့။ ဒါကြောင့် ပြောပါတယ်။ Pixar ဟာ Technology ကြောင့် ဆိုတာထက် Story-telling ဆိုတာကို ပိုအလေးထားလို့ပဲ။ ဇာတ်ကြောင်းပြောတဲ့နေရာမှာတောင် ဘဝနဲ့ပိုမိုသက်ဆိုင်တဲ့ အချက်တွေကို ပြောပြနိုင်ခြင်းတွေကြောင့်ပဲ။
ဒါဆို Pixar ကထုတ်တဲ့ ဇာတ်ကားတိုင်းဟာ အလွန့်အလွန်ကို ကောင်းနေလားဆိုတော့ ဇာတ်ကားတိုင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဥပမာ .. Cars2တို့လို သိပ်အစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့တဲ့ (3rd Class) ရုပ်ရှင်ရှိခဲ့သလို
Monsters, Inc. တို့The Incredibles တို့Ratatouille တို့Brave တို့လို (2nd Class) ဇာတ်ကားကောင်းတွေလည်း ရှိခဲ့သလို
Up တို့ Toy Story3တို့Wall-E တို့Finding Nemo တို့Inside Out တို့လို ကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံး အလွန်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ (1st Class) ဇာတ်ကားတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါဆို ခု Finding Dory ဇာတ်ကားက ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ 1st Class လား 2nd Class လား 3rd Class လားဆိုတော့ 2nd Class ထဲကလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်။ Finding Nemo ဇာတ်ကားကို မိဘနှင့် သားသမီးကြားက ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတတ်တဲ့ ပဋိပက္ခသဘောတရားလေးတစ်ခုနဲ့စတင်ထားတယ်ဆိုရင် ယခု Finding Dory သည် မိဘနှင့်သားသမီးကြားမှာ ရှိတဲ့ သံယောဇဉ်သဘောတရားလေးတစ်ခုနဲ့စတင်ထားတာပေါ့။
သင်ခန်းစာ (၁) - မိဘတွေကို ယုံကြည်ပါ။
Finding Nemo တုန်းက ကျွန်တော်တို့ကို မည်သည့်ဘဝသင်ခန်းစာတွေ သင်ပေးခဲ့သလဲဆိုတော့ မိဘတိုင်းဟာ အတ္တကြီးချင် ကြီးမိနေလိမ့်မယ်။ သို့သော် ထိုအတ္တတွေဟာ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကျိုးတွေအတွက် မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့လို သားသမီးတွေအတွက်ပဲ။ ဟုတ်တယ်။ သူတို့ရဲ့အတ္တတွေဟာ သူတို့အလွန်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ သားသမီးလေးတွေအတွက်ပဲ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်တော့ သူတို့တွေဟာ လိုအပ်တာထက် ပိုမိုစိုးရိမ် ပူပန်နေမိလိမ့်မယ်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်တော့ သူတို့ဟာ လိုအပ်တာထက် ပိုမိုလွန်ကဲစွာ ပြုမူနေမိလိမ့်မယ်။ ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့တွေက ဟားတိုက်ချင်တိုက်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုတော့ သတိရပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေ အန္တရယ်ဆိုတာကို မျက်ဝါးထင်ထင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကြုံတွေလာတဲ့ အခါတွေကျမှ မိဘတွေရဲ့လိုအပ်တာထက် ပိုမိုစိုးရိမ်လွန်ကဲမှုဟာ အလွန်အရေးပါ အဖိုးတန်ပါလားဆိုတာ သိလာရပါတယ်။ သိပ်နောက်မကျခင် သိရရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မိဘတိုင်းမှာ သားသမီးတွေကို ဒါမလုပ်နဲ့ဒါလုပ်ဆိုတာ စကားတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေရှိနေလို့ပဲ။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့မိဘတွေဟာ ကျွန်တော်တို့မည်ကဲ့သို့ပဲ အခြေအနေတွေရောက်နေပါစေ ဘယ်တော့မှ ကျွန်တော်တို့ကို လက်လွှတ်အဆုံးအရှုံးခံမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။
သင်ခန်းစာ (၂) ကူညီခြင်း နှင့် ကူညီခြင်းကို လက်ခံခြင်း
Finding Nemo ရော Finding Dory ရော နှစ်ကားစလုံးမှာ တူညီတဲ့အချက်တစ်ခုက တစ်ခြားသူတွေ မိမိကို ကူညီကြလိမ့်မယ်။ ဒါကို မိမိက လက်ခံသင့်တယ်ဆိုရင် လက်ခံလိုက်ပါဆိုတဲ့ အသိတရားလေးတွေ ပေးစေခဲ့တယ်။ စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင် Nemo လေးကို ရှာဖွေခန်းထွက်ခဲ့ရတုန်းက ဖခင်ဖြစ်တဲ့ Marlin တစ်ကောင်တည်း ကြိုးပမ်းပြီးရှာဖွေခဲ့မယ်ဆိုရင် သူ Nemo လေးကို ရှာတွေ့နိုင်ခဲ့ပါ့မလား? ရာခိုင်နှုန်းအလွန်နည်းပါးပါတယ်။ သူရဲ့ခရီးစဉ်ကြီးတစ်လျှောက်မှာ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ သူတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီခြင်းကို သူလက်ခံခဲ့လို့နောက်ဆုံးမှာ Nemo လေးကို တွေ့ခဲ့ရသလိုပဲ .. ယခု Dory ဇာတ်ကားမှာလည်း Dory ကို ကူညီပေးကြတဲ့ သူတိုင်းရဲ့အကူအညီကို Dory လက်ခံခဲ့တယ်။ Dory ကို ကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ သူတွေထဲမှာ Marlin တို့သားအဖတင်သာမကပဲ Octopus ကြီး Hank ရယ် Destiny ဆိုတဲ့ အနီးမှုန်ငါးမန်းမလေးရယ် Bailey ဆိုတဲ့ အသံနဲ့အာရုံခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ဝေလငါးလေးရယ် နဲ့တစ်ခြားတရိစ္ဆာန်လေးတွေ အမြောက်အမြား ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လူ့ဘဝတွေမှာ မိမိတစ်ကိုယ်ရည်တည်း မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အရာတွေ တော်တော်များများ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ မိမိညံ့ဖျင်းလို့မဟုတ်ပါဘူး။ မတူညီတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့် တစ်ခြားသူတစ်ပါးက အကူအညီပေးရန်တောင်းဆိုလာပါက လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို လက်ခံသင့်တယ်ဆိုတာ Finding Nemo ဇာတ်ကားကရော Finding Dory ဇာတ်ကားကပါ သာဓကအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကို ပြသခဲ့ပြီးပါပြီ။
ဇာတ်ကားနှစ်ကားစလုံးမှာ သိသာစွာ ဖော်ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာနောက်ထပ် နှစ်ခုကတော့ Teamwork နဲ့Friendship ဆိုတာပဲ။ ဒါကိုတော့ ထိုရုပ်ရှင်ကားနှစ်ကားစလုံး ကြည့်ခဲ့ဖူးသူတိုင်း သိခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ တစ်ခြား Animation ဇာတ်ကားတွေမှာလည်း အလားတူ Themes တွေ တွေ့ရပါများသောကြောင့် ကျွန်တော် အသေးစိပ်ကို မရေးလိုတော့ပေ။
သင်ခန်းစာ (၃) - ယခုထက်ပို၍ ကြိုးစားနိုင်ရန် သတ္တိမွေးမြူသင့်ခြင်း
Finding Nemo မှာတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ ယခု Finding Dory မှာမတွေ့ခဲ့တာတစ်ခုကတော့ မိမိစွမ်းဆောင်ရည်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ နယ်ပယ်ထဲမှာပဲ မနေပဲ ထို့ထက်ပိုမိုကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ လောကကြီးထဲကို ချဲ့ထွင်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းခြင်းပဲ။ Finding Nemo မှာတုန်းက ဖခင်ဖြစ်သူ Marlin သည် သူနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ဒေသတစ်ခုကနေပြီး တစ်ခြားအပြင်လောကကို ထွက်ခွာဖို့စိတ်တောင်မကူးခဲ့ပေ။ မမြင်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တွေကို သူကြောက်နေခဲ့တာကိုး။ ဒါပေမဲ့ သားလေးဖြစ်သူ Nemo ကို လှေပေါ်ကလူကြီးတစ်ယောက်က ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ သူ့ရဲ့Comfort Zone ထဲကနေ သတ္တိတွေမွေးပြီး ထွက်လာခဲ့တာ သားဖြစ်သူကို ရှာဖွေဖို့ခရီးစဉ်စခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေလည်း တစ်နေရာတည်းမှာပဲ အမြဲရပ်နေတော့မှာလား ဆိုတာကို အမြဲအတွေးဝင်စေမိတယ်။ မိမိလုပ်နိုင်တာထက် အမြဲပိုလုပ်နိုင်အောင် မကြောက်မရွံ့ပဲ အမြဲကြိုးစားနေရမယ်ဆိုတာ Finding Nemo က ပေးခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာတစ်ခုပဲလေ။
သင်ခန်းစာ (၄) - အခွင့်အရေးကို မှန်ကန်စွာ အသုံးချတတ်ခြင်း
Finding Dory ကို ကြည့်ပြီးတဲ့သူတွေ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခန်းကို မှတ်မိနေပါလိမ့်မယ်။ Marlin နဲ့Nemo တို့သားအဖနှစ်ယောက် နောက်ဆုံးကျဉ်းထဲကျပ်ထဲကို ရောက်နေတဲ့အချိန်လေ။ ငါးအလှပြလှောင်ကန်လေးထဲကို ရောက်နေပြီး ထိုထဲကနေထွက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခန်းလေ။ ထိုအချိန်ဟာ Dory ကို သူတို့တစ်သက်လုံး ဆုံးရှံးရတော့မဲ့အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်သွားနိုင်ခဲ့တယ်။ ဗျာများပြီး စိုးရိမ်နေတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ Marlin တစ်ယောက် အတွေးမှာ ဘာဝင်လာသလဲဆိုတော့ ဒီအချိန်မှာ Dory ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာပဲ။ Dory ဆိုရင် ဘာလုပ်မလဲ? ဘာမှ စဉ်းစားနေမှာမဟုတ်ပဲ ရရှိလာတဲ့ အခွင့်အရေးတိုင်းကို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိုးရိမ်ခြင်းအလျင်းမရှိပဲ ကြိုးစားပြီး ရုန်းထွက်သွားနိုင်မယ်ဆိုတာပဲ။ သူတို့သားအဖနှစ်ယောက်လည်း Dory ကျင့်သုံးတဲ့နည်းလမ်းကဲ့သို့ကျင့်သုံးခဲ့ကြတယ်။
ဒါဟာ ဘာကို ပြောချင်သလဲလို့စဉ်းစားလိုက်မိတော့ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ဘဝမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချမှတ်တဲ့အခါ ကြောက်စိတ်တွေ ဝင်တတ်ကြတယ်။ အဲ့လို ကြောက်စိတ်တွေဝင်လာတယ်ဆိုတာ ဒုတိယအတွေးတစ်ခု ဝင်လာလို့ပဲ။ ငါဖြစ်နိုင်ပါ့မလား? ငါလုပ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ စိတ်ပေ့ါ။ ခုလို အတွေးဝင်လာရင် များသောအားဖြင့် ဖြစ်တတ်လေ့ရှိတဲ့အရာကတော့ ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့သောကတွေဝေလာတာနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်လေ့ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုရင် ဘဝဟာ ပုံသေကားချပ်ကြီးတစ်ခုမှ မဟုတ်တာ။ ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း အမြဲတမ်းဖြစ်လေ့ရှိခဲ့တာမှ မဟုတ်တာ။ ဒီအချက်ကို ကျွန်တော် ဟိုတလောက Jungle Book အကြောင်းမှာလည်း ထည့်ရေးသားခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအချက်က အမြဲတမ်းတော့ မမှန်နိင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ တစ်ခါတစ်ရံကျရင်တော့ Plan B တွေကပဲ အောင်မြင်မှုကို ရောက်စေတတ်တာကြောင့်ပဲ။ ဒါကြောင့် သေချာတာတစ်ခုကတော့ အခြေအနေ အချိန်အခါကို ကြည့်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ အတွေးကို တွေးတတ်ကာ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်နိုင်ဖို့ပဲလေ။
သင်ခန်းစာ (၅) - ဇွဲ နှင့် လုံံ့လ မလျော့ ခြင်း
Finding Dory ဇာတ်ကားမှာ ကျွန်တော်သဘောကျမိခဲ့တဲ့အချက်လေးတစ်ခုက Dory တစ်ယောက် သူမရဲ့မိဘနှစ်ပါးကို ရှာဖွေခြင်းကို အခြေအနေမျိုးစုံက ဟန့်တားနေခဲ့သည့်တိုင်အောင် မလျော့သော လုံ့လနဲ့ဇာတ်ကားဆုံးတဲ့အထိ သူမရဲ့မိဘနှစ်ပါးကို ရှာဖွေခြင်းကို မရပ်တန့်ခဲ့ဘူး။ Dory ရဲ့Short-term Memory Lost ဖြစ်တတ်ခြင်းကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် သူမအနားမှာ ရှိတဲ့သူတွေအဖို့တော့ သူမဟာ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူမကို အနားက သူငယ်ချင်းတိုင်းက ကူညီပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါဟာ သူမကို ချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲလို့ကျွန်တော်ထင်မိတယ်။ ဇာတ်လမ်းရဲ့တစ်နေရာမှာ Dory တစ်ယောက် သူမရဲ့မိဘနှစ်ပါးကို ရှာဖွေခြင်းကို ရပ်တန့်သင့်ပြီလို့ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းစွာ ထင်လိုက်မိတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုလောက်ထိ မျှော်လင့်ချက်တွေ မဲ့စရာ အခြေအနေတွေ ရောက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ Dory တစ်ယောက် လက်လျော့ခဲ့လား? မလျော့ခဲ့ပါ။ သူမ ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကို မျှော်လင့်ချက်တွေ ကင်းမဲ့စွာနဲ့ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲ သူမဆက်လက် ရှာဖွေခဲ့တယ်။ သူမရဲ့ဒီလို စိတ်ဓာတ်လေးတွေကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ရုပ်ရှင်ထဲကို ဝင်ပြီး မိဘနှစ်ပါးကို မတွေ့တွေ့အောင်ကို ရှာတွေ့တဲ့အထိ ကူညီပေးချင်တဲ့ စိတ်တောင် ဖြစ်မိတဲ့အထိပါ။
Finding Dory ဇာတ်ကားသည် Finding Nemo ဇာတ်ကားထက် သာလွန်ကောင်းမွန်ချင်မှ ကောင်းမွန်မိလိမ့်မယ်။ သို့သော် Finding Nemo ထက် သာလွန်တဲ့ အရာတစ်ခုကတော့ အသိဉာဏ် ဦးနှောက်က မေ့ချင်မေ့နေပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကတော့ ဘယ်တော့မှ မေ့မနေပါဘူး ဆိုတာပဲလေ။ အခုပဲကြည့်လေ။ Dory တစ်ယောက် Short-term memory loss ဆိုတဲ့ ရောဂါရှိတတ်သူတစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့် သူမရဲ့မိဘနှစ်ပါးကို ဦးနှောက်က မေ့လျော့နေခဲ့ပေမဲ့ နှလုံးသားရဲ့တစ်နေရာမှာတော့ မေ့ဖျောက်လို့မရနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ထိုမိဘနှစ်ပါးကို ရှာဖွေဖို့ခရီးထွက်ခဲ့တာပဲ။
Pixar ဇာတ်ကားတွေမှာ အမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်ကို အဓိကနေရာမှာ ထားပြီး ဖော်ကြူးထားတာဟာ Brave ဇာတ်ကားက စတင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းဇာတ်ကားအချို့မှာပါ အမျိုးသမီး အဓိကဇာတ်ကောင်တွေကိုထည့်အသုံးပြုလာတာကို တွေ့ရလာတယ်။ အထူးသဖြင့် မနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ Inside Out မှာ ပိုသိသာလာတယ်။ Inside Out ဇာတ်ကားတွင် အဓိကအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်သည် တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပေ။ သုံးယောက်တောင်ပင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုနည်း၎င်းပင် ယခု Finding Dory သည်လည်း Pixar ရဲ့အမျိုးသမီးအဓိကဇာတ်ကောင်ပါဝင်တဲ့ တတိယမြောက်ဇာတ်ကားဖြစ်လာခဲ့တယ်။
နာမည်ကျော် Ellen DeGeneres ကပဲ Dory ဇာတ်ကောင်အတွက် ပြန်လည်ပါဝင်ခဲ့ပြီး Albert Brooks ကလည်း Marlin အဖြစ်ပြန်လည်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Ed O'Neill နဲ့ Diane Keaton တို့က ဇာတ်ကောင်အသစ်တွေဖြစ်တဲ့ ရေဘဝဲကြီး Hank အဖြစ်နဲ့Dory ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူအဖြစ်နေရာကနေ အသံသွင်းခဲ့ကြတယ်။ Finding Nemo တို့Wall-E တို့ကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Director ဖြစ်သူ Andrew Stanton ကပဲ ယခုဒီဇာတ်ကားကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။
Finding Dory ရဲ့ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်ကို ပြောရမယ်ဆိုရင် Marlin တို့Nemo တို့သားအဖတွေနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နေတဲ့ Dory တစ်ယောက် Nemo လေးတစ်ယောက် တက်တဲ့ကျောင်းမှာ Migration အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ခန်းစာတစ်ခုကို ကြားလိုက်ရတဲ့အခါ သူမငယ်စဉ်က သူမနှင့် ကွဲသွားပြီးပျောက်သွားတဲ့ မိဘနှစ်ပါးကို ပြန်လည်သတိရလာကာ ထိုမိဘတွေကို ရှာဖွေရန် ခရီးကြမ်းကြီးတစ်ခုကို Marlin တို့သားအဖ အကူအညီနဲ့ထွက်လာခဲ့ခြင်းပဲ။ သူမရဲ့ရှာပုံတော်ခရီးစဉ်ကြီးထဲတွင် သူမကို ဝိုင်းဝန်းကူညီခဲ့ကြတဲ့ တရိစ္ဆာန်ပေါင်းစုံကို တွေ့ခဲ့ရတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးကို မမျှော်ကိုးပဲ စိတ်ထားသန့်သန့်နဲ့ကူညီခဲ့ကြတဲ့သူတွေ ရှိသလို မိမိအကျိုးအတွက်နဲ့ကူညီတဲ့ ရေဘဝဲကြီး Hank လည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ Hank ဟာ ဒီနှစ်ရဲ့Bing Bong တစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ Bing Bong ဟာ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းခဲ့ပေမဲ့ Hank တစ်ယောက်ကတော့ လက်တွေ့ဘဝနဲ့ပိုမိုနီးစပ်တယ်။ Bing Bong က သနားစရာကောင်းခဲ့ပေမဲ့ Hank တစ်ယောက်ကိုတော့ ပရိသတ်တွေ ကိုယ်ချင်းစာနိုင်ခဲ့တယ်။
Pixar ရဲ့ဇာတ်ကားတွေဟာ Climax ကို အကောင်းဆုံးအမြဲတမ်းဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်။ Inside Out ရဲ့ Climax တုန်းက ကျွန်တော်တို့တွေ ဝေဝါးပြီး ခွဲခြားလို့မရတဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့အတူ မျက်ရည်တွေဝေခဲ့ရပေမဲ့ ယခု Finding Dory ရဲ့Climax ကတော့ ပရိသတ်တွေကို အားအင်တွေပေးခဲ့တယ်။ Monsters, Inc., Toy Story3နဲ့ Inside Out တို့လို တန်းတူအဆင့်ရှိတဲ့ Climax ကို ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပြန်သေးတယ်။ Finding Dory ကို ဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဘာကို ဝေဖန်ရမလဲဆိုတာ ကျွန်တော်စာဖတ်သူကို ပြန်လည်မေးလိုက်ပါရစေ။ လွန်စွာအပြစ်ကင်းတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ အပြစ်မပြောရက်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသက်တွေကြီးလာလို့လားတော့မသိဘူး။ ငယ်ငယ်က Finding Nemo ကိုကြည့်ခဲ့ရတုန်းကလိုမျိုးတော့ မခံစားမိခဲ့ဘူး။
“I mean, kid, I don't wanna anyone to worry about. You are lucky. No Memories, no problems.”
ရေဘဝဲကြီး Hank က အမြဲလိုလို မေ့လျော့လေ့ရှိတတ်တဲ့ Dory လေးကို ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခွန်း။ Hank က သူ့မှာသာ Dory လို Short-Term Memory Loss ရောဂါလေးရှိခဲ့ရင် အရာအားလုံးကို မေ့ပျောက်လိုက်ပြီး ပင်လယ်ပြာကြီးထဲကို ကူးသွားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စကားကို Dory က သူမကတော့ မမေ့ချင်ဘူး။ သူမရဲ့မိသားစုကိုပဲ လိုချင်တယ်လို့ငြင်းချက်ထုတ်လိုက်တုန်းက ပြောခဲ့တဲ့ စကားပေါ့။ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ပြဿနာတွေဟာ အတိတ်ကို ပြန်လည်မှတ်မိနေတဲ့ မှတ်ဉာဏ်တွေပဲလေ။ အနာဂတ်ဟာ မရေရာတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့တွေဟာ စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့အတိတ်ကိုပဲ ပြန်ပြန်ကြည့်တတ်ကြတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အတိတ်က ကိုယ်တွေနဲ့ပိုရင်းနှီးခဲ့တာကိုး။ အနာဂတ်ဟာ မရေရာတဲ့အတွက် လူတိုင်းဟာ ရင်ဆိုင်ရမှာ ထိတ်လန့်တတ်ကြတယ်လေ။ ဒါဟာ အဓိကပြဿနာတစ်ခုပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူသားတိုင်းရဲ့အတိတ်တိုင်းဟာ မလှပနေခဲ့လို့ပဲ။ ထိုအတိတ်ဆိုးတွေကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ထိုအတိတ်တွေကို မမှတ်မိနိုင်တော့ရင် အရမ်းကောင်းမှာပဲလို့ ငြီးတွားတတ်ကြတယ်။ ထို့ကြောင့်ပင် Hank သည် အတိတ်ကို မေ့လိုက်ချင်သည်။ ထို့ကြောင့် Dory တစ်ယောက် ကံကောင်းတယ်လို့သူပြောခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်။
Pixar ရဲ့ရုပ်ရှင်တွေ ဘာကြောင့်ကောင်းရသလဲလို့ဆိုတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ပထမဆုံးမေးခွန်းကို ကျွန်တော်အခု ဖြေလိုက်ပါမယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ကို ဇာတ်သိမ်းတွေမှာ အကောင်းမြင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်သဘောတရားလေးတွေနဲ့ ချန်ရစ်ပေးထားခဲ့လို့ပဲ။ လူဆိုးကိုတောင် လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်လို့တောင် ကျွန်တော် ယုံကြည်မိတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့သူတစ်ယောက်ကို စိတ်ဓာတ်ပြန်လည် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အထိ မှော်ပညာကဲ့သို့အစွမ်းထက်တဲ့ ဆေးတစ်လက်ပါပဲ။
“When life gets you down, do you want to know what’ve you gotta do?
ပင်လယ်ပြာကြီးထဲမှာ ဆက်လက် ရေကူးနေတဲ့ ငါးပြာမလေး Dory လိုပဲ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေလည်း ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာပဲ ရောက်နေပါစေ ဘဝလမ်းခရီးကို ဆက်လက်လျှောက်ကြရအောင်ဗျာ …
Ref: http://www.techinsider.io/why-pixar-movies-are-so-good-2015-7 and https://www.youtube.com/watch?v=xTM-AdrIpaE